ဒေးဗစ်လား အဖမ်းခံရမှုအပေါ် သခင်ရေရှုနာမတော်နဲ့အတူ မတရားမှုပါလို့ပြောလာခဲ့တဲ့ အမျိုးသမီး - San Nay chi
ဒေးဗစ်လား အဖမ်းခံရမှုအပေါ် သခင်ရေရှုနာမတော်နဲ့အတူ မတရားမှုပါလို့ပြောလာခဲ့တဲ့ အမျိုးသမီး
ဒီနေ့ဟာ မြန်မာခရစ်ယာန်သမိုင်းမှာ မဖြစ်ဖူးသောအရာ ဖြစ်ပျက်ရတဲ့ နေ့ထူးနေ့မြတ် ဖြစ်ပါတယ်။
ကျမတို့ချစ်တဲ့ ဆရာ‌ဒေးဗစ်လားတစ်ယောက် ရာဇဝတ်သားတစ်ယောက်လို လက်ထိပ်တန်းလန်းနဲ့ ရဲတွေဖမ်းခေါ်သွားတဲ့ မြင်ကွင်းဟာ ဘယ်တော့မှ မမေ့နိုင်တော့မယ့် မြင်ကွင်းဖြစ်သလို၊ ကျမတို့နှလုံးသားကို ထိခိုက်နာကျင်စေတဲ့ ပုံရိပ်တွေလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
ရဲတွေခေါ်ဆောင်ရာသို့ သိုးသူငယ်လို လိုက်ပါသွားတဲ့ ဆရာ့ပုံရိပ်တွေကို ကြည့်ရင်း မျက်ရည်ဖြိုင်ဖြိုင် ကျကြရတယ်။ ဝမ်းနည်းကြေကွဲစွာ ငိုကြွေးကြရတယ်။
နိုင်ငံတော်ပုန်ကန်မှု မဟုတ် လာဘ်စားမှု မဟုတ် မုဒိမ်းမှု မဟုတ် လူသတ်မှု၊ လိမ်လည်မှု၊ ခိုးမှု၊ မှောင်ခိုပစ်စည်း ရောင်းဝယ်မှု… အဲဒီအမှုတွေ ဆရာကျူးလွန်ခဲ့လို့ အခုလို ဆရာအဖမ်းခံရတာ မဟုတ်လို့ မိုင်တို့ ဂုဏ်ယူတယ်၊ သိပ်ဂုဏ်ယူတယ်။ သခင်ယေရှုက ယုံကြည်သူတွေ ကြုံတွေ့ရမယ့် အရာတွေကို ကြိုပြောပြထားခဲ့ပြီးသားမို့ ဝိညာဉ်မျက်စိ ပွင့်လင်းသူတိုင်း ဒီအဖြစ်အပျက်အတွက် သိပ်အံဩကြမယ် မထင်ပါဘူး။
ရှင်ပေါလုတို့ မုန်တိုင်းမိပြီး သဘ်ောပျက်သွားတာ ဘယ်နေရာရောက်သွားဖို့လဲ ဒံယေလတို့အဖွဲ့ ကြုံတွေ့ရတဲ့ အကြောင်းအရာက သူတို့နိုင်ငံမှာ ဘာတွေဖြစ်ပျက်ဖို့ အကျိုး ဖြစ်သွား‌တယ်ဆိုတာ ကျမ်းစာဖတ်သူတိုင်း သိတယ်။
🍒 ကျမ်းစာထဲမှာ တွေ့ရတဲ့၊ ဘုရားသခင်က ကြီးကြီးမားမား အသုံးပြုခဲ့သူတွေရဲ့ အသက်တာကို လေ့လာကြည့်ရင် အားလုံးဟာ တိန်တိန်မြည်သမားတွေ ဖြစ်နေတာကို တွေ့ရမှာပါ။ အထူးသဖြင့် ဟေဗြဲ ၁၁ ထဲက ယုံကြည်ခြင်း သူရဲကောင်းတွေ ဖြတ်ကျော်ခဲ့ရတဲ့ ဘဝတွေဟာ တကယ်ပဲ ကြောက်စရာကောင်းပါတယ်။ သခင်ယေရှု အပါအဝင် ရှင်ပေါလုတို့လို NT ထဲက သူရဲကောင်းတွေလည်း နဲနဲမှ မလျော့ပါဘူး။
မတရား စီရင်ခြင်း ခံရတယ် အထင်လွဲခံရ၊ နှင်ထုတ်ခံရ၊ အပယ်ခံရ ဖမ်းဆီးနှိပ်စက်ခြင်းနဲ့ ထောင်သွင်း အကျဉ်းချခံရခြင်းလည်း မလွတ်ကြဘူး။
🍒 မိုင် တွေးမိတယ် ဘုရားက လူရွေးတဲ့ နေရာမှာ သိပ်တော်တယ်လို့။ ဘယ်လောက်ပဲ အခက်အခဲတွေ ကြုံတွေ့ရပါ‌စေ ထွက်ပြေး နောက်ဆုတ် ပုန်းရှောင်မသွားမယ့် နာမတော်ကို လောကအရာတွေနဲ့ မလဲပစ်မယ့် ဘာတွေပဲ ကြုံရကြုံရ သစ်စာမဖောက်မယ့် အဆုံးထိ တည်ကြည်မယ့်သူကို ဘုရားသိတယ်။ ဆရာဒေးဗစ်လား ကြုံတွေ့ရသမျှတွေကို ပြန်သုံးသပ်ကြည့်တော့ သူ့ကို ဘုရားသခင် ဒီလောက်တောင် စိတ်ချ (trust) နိုင်တာကို အရမ်းလေးစားသွားတယ်။
“ကျမပြောဖူးပါတယ် ကျမတို့က ဆရာ့သင်တန်းကို ဆယ်နှစ်လုံးလုံး တက်ခဲ့ကြသူတွေဆိုတာ။ ဆယ်နှစ်ဆိုသော အချိန်ကာလက လူတစ်ယောက်ရဲ့ ဘဝဇာတ်လမ်း၊ အတွေးအခေါ်၊ စိတ်နေသဘောထား၊ ယုံကြည်ချက်၊ အမူအကျင့်နဲ့ စိတ်ခံစားချက်တွေကို သိရှိနားလည် သဘောပေါက်နိုင်ဖို့ ကောင်းကောင်းကြီး လုံလောက်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် မိုင်တို့က ဆရာ့ကို အမြဲတမ်း ချစ်ကြတယ်၊ လေးစားတယ်၊ trust လည်းဖြစ်တယ်။
🍒 ခရစ်ယာန်တွေဆိုတာ ညှင်းဆဲလေလေ ပွားများလေလေ။ ချစ်သော မြန်မာပြည်ကြီးမှာ နိုးထမှု အကြီးကြီးဖြစ်ဖို့
ကြီးမားသော အပြောင်းအလဲ ဖြစ်လာဖို့ ဘုရားရဲ့ အကြံအစည်ကို ဘယ်သူမှ ကြိုမသိနိုင်ပါဘူး။ မြန်မာပြည်ကြီး ကောင်းကြီးခံစားရဖို့၊ သူတစ်ပါးကို ကောင်းကြီးပေးတဲ့ နိုင်ငံဖြစ်လာဖို့ ရဲရဲတောက် ကြွေးကြော်ဝန်ခံခဲ့သူ ဆရာဒေးဗစ်လားဟာ သူရရှိထားတဲ့ ရူပါရုံအတွက် သူကိုယ်တိုင် မျိုးစေ့အဖြစ် အစတေးခံ ပေးဆပ်နေတာ သဘာဝကျပါတယ်။
ဆရာကြုံတွေ့ ရင်ဆိုင် ဖြတ်သန်းနေရသမျှတွေကို ပြန်တွေူးကြည့်လိုက်တော့ ဆရာဟာ.. သခင်ယေရှုလိုပဲ ဘာသာရေးဆရာတွေရဲ့ ပြစ်တင်ဝေဖန် တားဆီးပိတ်ပင်ခြင်းတွေ ခံခဲ့ရတယ် သခင်ယေရှုလိုပဲ အယောင်ဆောင်သမားတွေရဲ့ တိုက်ခိုက်ခြင်း ခံခဲ့ရတယ် သခင်ယေရှုလိုပဲ မိမိလူမျိူးတွေရဲ့ အပယ်ခံခဲ့ရတယ် အခုလည်းပဲ သခင်ယေရှုလို ပရိသတ်‌တွေက တံတွေးထွေး၊ လျှာနဲ့ရိုက်၊ ကျိန်ဆဲ၊ လှောင်ပြောင်၊ ကဲ့ရဲ့… ပြီးတော့ တရားစွာ ဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်၊ စစ်ကြောစီရင်၊ ထောင်ထဲပို့။
ဒီအချိန်ထိ ဖရှင်းချက်ထုတ်ဖို့ စကားတစ်ခွန်းမှ မဟ၊ သူ့ကို ပြုသမျှ ငြင်းဆန်ခြင်းလည်း မပြု.. just like Jesus did when he was brought to trial!
🍒 ကားတိုင်လမ်းဟာ လွယ်ကူချောမွေ့တယ်လို့ ဘယ်ကျမ်းစာမှာမှ ရေးမထားဘူး စစ်မှန်သော အမှုတော်ဆောင်တွေရဲ့ ဘဝခရီးဟာလည်း ဖြောင့်ဖြူးလိမ့်မယ်လို့ ဘယ်ကျမ်းပိုဒ်မှာမှ ကတိပေးမထားပါဘူး နှုတ်ကပတ်တော်က ကတိပေးထားတာကတော့.. ကျမတို့ မခံနိုင်လောက်သော စုံစမ်းနှောင့်ယှက်ခြင်းရောက်ဖို့ အခွင့်ပေးမှာ မဟုတ်တဲ့အကြောင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဖတ်မှတ်ခဲ့ဖူးတယ် သင်ဘယ်လောက် ချိုးဖဲ့ခြင်းခံနိုင်တယ် ဆိုတဲ့အပေါ် မူတည်ပြီးတော့ သင့်အသက်တာအားဖြင့် ဘုရားအလုပ်လုပ်‌လေပဲ တဲ့။
သခင်ယေရူ ခံစားခဲ့ရတဲ့ ဆင်းရဲဒုက်ခ ဝေဒနာတွေကို မျှဝေယူဆောင်နေတဲ့ ဆရာဒေးဗစ်လားအတွက် ကျမတို့ ဂုဏ်ယူဝမ်းမြောက်နေတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ဒါပြီးသွားရင် မြင်တွေ့ခွင့်ရတော့မယ့် ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းတန်ခိုးအတွက်‌ကြောင့်ပါ။ အခုတော့ မှောင်မည်းမည်း မြေကြီးထဲမှာ မျိုးစေ့က မွန်းကျပ်စွာ ပုပ်ပျက်နေရဆဲ.. ။၏
🍒 👉 လက်ထိပ်အခတ်ခံရတဲ့ ဆရာဒေးဗစ်လား 👉 ရဲတွေ ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်ခံရတဲ့ ဆရာဒေးဗစ်လား 👉 ပြစ်တင် ကျိန်ဆဲ လှောင်ပြောင် ကဲ့ရဲ့ခြင်း ခံနေရတဲ့ ဆရာဒေးဗစ်လား 👉 မတရားသဖြင့် စစ်ကြောစီရင်၊ အကျဉ်းချခံရပြီဖြစ်တဲ့ ဆရာဒေးဗစ်လား ဆရာ့အားဖြင့် ကျမတို့ သခင်ယေရှုရဲ့ ဝေဒနာတွေကို လက်တွေ့ကျကျ မျှဝေနိုင်ခဲ့ပြီ
သူတို့ဆရာ ဖမ်းဆီးစစ်ဆေးခြင်း ခံနေရတာကို မျက်ဝါးထင်ထင် ငုတ်တုတ်ကြည့်နေကြရတဲ့ အချိန်မှာ ခံစားရတဲ့ တပည့်တော်တွေရဲ့ နာကျင်မှု၊ အားငယ်မှု၊ စိုးရိမ်ပူပန်မှုနဲ့ မျက်ရည်စက်တွေကိုလည်း အခုတော့ ထပ်တူထပ်မျှ နားလည်ခံစားပေးနိုင်ကြပြီ။
ဆရာ့ကြောင့် ယုံကြည်သူတွေ ရင်ခုန်သံချင်း စည်းချက်ညီသွားပြီ။ ဟာလေလုယာ!
🍒 အော်.. ကျမကတော့.. ဟိုးလွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်တွေတုန်းက မျှော်လင့်ချက်မဲ့၊ နာကျင်ကြေကွဲစွာ မျက်ရည်စက်လက်နဲ့ ဆရာ့ဆီလာပြီး ဆုတောင်းခံလို့ ဆရာက ကြင်နာစွာ ခေါင်းပေါ်လက်တင်ပြီး ဆုတောင်း ကောင်းကြီးပေးခဲ့ဖူးတဲ့ ပရောဖက်လည်းပြုရင်း အားပေးစကားတွေ ပြောခဲ့ဖူးတဲ့.. “မိုင်” ဆိုတဲ့ မိန်းမတစ်ယောက်ပါ.. ။ ။
~ Mai Sokhlei Par (Chinland Rose)